Cori Gauff oo 15 sano jir ah oo wacdaro ka dhigtay tartanka Tenniska ee Wimbledon… – Hagaag.com
Cori Gauff oo 15 sano jir ah oo wacdaro ka dhigtay tartanka Tenniska ee Wimbledon…
Posted on 6 Luulyo 2019 by Admin in Sports // 0 Comments
Ma guuleysatay? Su’aalaha ugu muhiimsan ee dadka reer Britain is weydiiyaan iyagoo weliba ka fiirsanaya shaashada natiijada ee garoonka koowaad ee tartanka Tenniska ee Wimbledon si ay u hubiyaan sii socoshada riyada Cori Gauff oo 15 sano jir ah.
Taageerayaal badan ayaa magaceeda ku qaylinayey kadib markii ay ka badisay gabadha reer Slovenia Polona Hercog 3-6, 7-6, 7-5.
Laacibadan 15 jirka ee Mareykanka ah ayaa kasoo kabsatay guuldaradii soo gaartay qeybtii hore ee ciyaartii ay kula jirtay Polona, waxay ku guuleysatay labadii qeybood ee dambe, waxayna gaartay wareega afaraad tartanka ugu caansan ee Tenniska.
Waxaa shaki ku jirin in tartanka Tenniska gabdhaha ay u dhalatay laacibad xoog badan oo jamaahiirta Tenniska ka daba dhaceen. Waxaa Laga yaabaa tan iyo markii uu soo baxay xiddiga Bjorn Borg xilli ciyaareedkii dhamaadkii todobaatameeyadii ee qarnigii hore aan dhicin laacibad sidan oo kale saameyn ugu dhex yeelata taageerayaasha tartamada Tenniska ee heybada leh.
“Waa waali,” ayey tiri Gauff, “Waalideyda in aan ogaado sida noloshu isbeddeli karto waqti yar gudaheed!”
Taageerayaasha ciyaaraha Tenniska ayaa soo jiidatay Gauff oo da’yar oo u soo gudubtay in ay ku biirto xirfadlayaasha Tenniska.
Gabadhan yar ayaa ka badisay Venus Williams oo shan jeer ku guuleysatay Tenniska, waxayna u aheyd laacibada ay ku deyato, markaasi ayey noqotay in il gaar ah lagu eego gabadhan yar.
Waxaa run ahaantii dhib ku ahaa abaabulayaasha tartanka in ay ku ciyaarsiiyaan garoonka koowaad qof ku jirta kaalinta 313, laakin markii la arkay xirfadeeda iyo in ay hore u socoto, walow ay u tahay tartankeedii ugu horeeyey ee ay ka qeyb gasho mid ka mid ah afarta Grand Slam ee ugu weyn.
Waxay tiri iyadoo qosleysa”Waxaan xasuustaa intaan Venus la kulmin mar aan ka baxayey garoonka tababarka oo aan arkay taageerayaal banaanka igu sugaya, mid ka mid ah caruurta ayaa i weydiistay inaan sawir la galo, kadib maalintii labaad markaan ka soo badiyey Venus Williams, taageerayaasha oo dhan waxay ku qaylinayeen magaceyga”. Gauff ayaa diiday in ay ka hor dhacdo dhacdooyinka soo socda inkastoo arrimaha si deg deg ah isu bedelayaan.